Ungawutshintsha njani umculo kwi-iPhone ngaphandle kwe-iTunes → iindlela ezininzi zokwenza | IPhone iindaba
UIgnacio Sala | | iPhone, Izifundo kunye neencwadana
¿Ungawutshintsha njani umculo kwi-iPhone? Akuyomfihlo ukuba baninzi abasebenzisi abangahambelaniyo iTunes. Inkqubo elawula umxholo wemaltimidiya ye-Apple ilunge kakhulu kwaye iyasinceda ukuba senze nantoni na, kodwa asingabo bonke abacinga ngokufanayo. Kunzima kuninzi lwenu ukwenza enye yezona zinto zisisiseko, njenge dlulisa umculo ukusuka kwikhompyuter uye kwi-iPhone yakho ngaphandle kwe-iTunes.
Ukuba ungandibuza into ekufuneka uyenzile ukuhambisa umculo ukusuka kwikhompyuter uye kwi-iPhone ngaphandle kwe-iTunes, bendizokuphendula "ufunde ukusebenzisa i-iTunes". Kwaye ayiyompendulo imbi ukusukela nje ukuba sifike kuye asifuni enye into, kodwa ndiyaqonda ukuba awufuni ukudlala i-iTunes ngentonga. Kwaye ayimfuneko ngokwenene. Zininzi iindlela zokwenza Dlulisa idatha ye-iPhone ngaphandle kwe-iTunes, kwaye kweli nqaku ndiza kuchaza iindlela ngeendlela zokuhambisa umculo kwi-iPhone ngaphandle kokusebenzisa isidlali seApple. Kwaye okona kungcono, uninzi lweendlela asimahla. Zonke zichaziwe apha ngezantsi.
1 Uwubeka njani umculo kwi-iPhone ngaphandle kokusebenzisa i-iTunes
1.1 Ndikunye neTransTrans
2 EaseUS MobiMover Simahla
3 Ungawutshintsha njani uMculo kwi-iPhone ngaphandle kokusebenzisa umbane
3.2 Ngomculo weApple
4 Ungazihambisa njani iingoma kwi-iPhone ngo-WhatsApp
5 Ngaba umculo ungadluliselwa kwi-iPhone ngeBluetooth?
6 Ezinye iindlela zokuphulaphula umculo ngaphandle kweintanethi kwi-iPhone
6.2 Google Play Umculo
Uwubeka njani umculo kwi-iPhone ngaphandle kokusebenzisa i-iTunes
Ukuba into oyifunayo kukwazi ubeka njani umculo kwi-iPhone Ngaphandle kokusebenzisa i-iTunes, apha ngezantsi uza kufumana ezinye iindlela kwinkqubo ye-Apple onokuyenza ngaphandle kweengxaki.
NgefowuniTrans singadlulisela umculo kunye nenye idatha kwi-iPhone ngaphandle iTunes. Sisicelo esinomdla kwaye kulula kakhulu ukusisebenzisa, kodwa kuya kufuneka usebenzise ikhompyuter. Ngapha koko, nanga amanyathelo oza kuyilandela:
Sinqakraza kwi uphawu lwe isixa (+).
Sikhetha iingoma esifuna ukuzithumela kwaye ucofe kuzo vula.
Silindele ukuba kugqitywe kugqitywe.
Njengoko ubona, akunakuba lula. Into emnandi ngokusebenzisa iFowuniTrans yokuhambisa umculo kwi-iPhone yileya iyakhawuleza, ilula, kwaye isimahla. Kodwa inqaku lokuba kum alibi kakhulu: umculo awungeni kumculi ukuba kufanelekile, kodwa kunoko ungene kumculi we "albhamu engaziwayo".
Kuyinyani ukuba emva koko wongeza isiciko kunye negama lealbham ngaphakathi ngokuchanekileyo, kodwa ayifani kubantu abafana nam abathanda ukuba konke oku kulungelelaniswe ngakumbi. Kwaye, ukuba ufuna ilayibrari egqibeleleyo, ndicinga ukuba eyona nto ibalulekileyo kukusebenzisa iTunes. IfowuniTrans lolunye lolona khetho lubalaseleyo ukuba awufuni kubenza nzima ubomi bakho okanye uchithe idenariyo.
Ukuba unqwenela, ungasebenzisa kwakhona iiPhonetrans ekusebenzeni umva, Oko kukuthi, dlulisa umculo kwi-iPhone uye kwikhompyuter.
EaseUS MobiMover Simahla
Enye indlela esinayo yokukopa umculo wethu owuthandayo kwi-iPhone, i-iPad okanye i-iPod touch, sisicelo EaseUS MobiMover Simahla, Isicelo esivumela ukuba sikhuphe umxholo kwisixhobo sethu siye kwi-PC okanye kwi-Mac okanye sikope kwenye kwenye. Cofa apha ukukhuphela oku Isoftware yasimahla yokuhambisa umculo kwi-iPhone
I-EaseUS MobiMover yasimahla iyasivumela dlulisa umculo wethu owuthandayo kwi-app yoMculo ye-iPhone yethu, i-iPad okanye i-iPod touch ngendlela elula kakhulu, elula kangangokuba ayibonakali iyinyani ukuba siyithelekisa nenkqubo enzima ekufuneka siyenzile ukuba sisebenzisa i-Apple iTunes.
Kuqala, kwaye nje ukuba sidibanise i-iPhone, i-iPad okanye i-iPod touch kwikhompyuter yethu, sikhetha ukhetho IMac / iPC kwisixhobo. Emva koko, simisela ifolda yomthombo, ifolda apho iifayile sifuna ukukopa zikhona. Singayenza le nkqubo ngokukodwa, ingoma ngengoma.
Ukuba kuzo zonke izinto ezikwifolda, sifuna ukukopa inani eliqingqiweyo, kufuneka sibeke imouse ngaphezulu kwefestile yeAudio kwaye ucinezele u-Hlela. Iwindow entsha iya kuvula, apho zonke iifayile zomculo eziza kukhutshelwa kwisixhobo sethu ziya kuboniswa. Ukuba asifuni ukuba bonke bakopishwe, kufuneka sikhethe ezo zingasiniki mdla.
Okokugqibela, sicinezela iqhosha ukungenisa ukuqala inkqubo, inkqubo ethi, ngokuxhomekeke kwinani leefayile kunye nobungakanani bazo, inokuthatha ixesha elingaphezulu okanye elincinci. Ugqithiso luhlala lukhawuleza kakhulu, ke kwimeko embi, inkqubo iya kuthatha ngaphezulu komzuzu.
I-EaseUS MobiMover Simahla is iyafumaneka yeWindows kunye neMac.
Ungawutshintsha njani uMculo kwi-iPhone ngaphandle kokusebenzisa umbane
Kwimeko apho ufuna ukwazi ungawutshintsha njani umculo kwi-iPhone ngaphandle kokusebenzisa intambo Umbane, sikunika ezi ndlela zimbi ukuze uxhomekeke kuphela kwaye uqhagamshele kwi-WiFi:
Oko kwaqala unyaka, ikhona Ivenkile yeeVenkile usetyenziso olusimahla olubizwa ngokuba Jukebox. Kulula kakhulu ukusebenzisa usetyenziso oluza kusivumela ukuba sikhuphele umculo kwi-iPhone yethu esele siyilayishe kwiDropbox. Inkqubo iya kuba yile ilandelayo:
Ngokusengqiqweni, ukuba asinaso isicelo esikhutshelweyo, inyathelo lokuqala kukuya kwiVenkile ye App, khangela iJukebox kwaye uyifake (nangona isenokuba linyathelo lesibini).
Siya kuso nasiphi na isicelo esivumela ukuba silayishe iingoma kwiDropbox. Eyona nto isengqiqweni kukuthatha ikhompyuter, uvule isikhangeli sewebhu, ukufikelela kwiDropbox kwaye ulayishe iingoma apho. Ukuba ufuna ukulawula ngcono into oyilayishayo, kunokuba ngumbono olungileyo ukwenza ifolda ebizwa ngokuba yi "iPhone Music", "Jukebox" okanye into efanayo.
Sidlale kwi Ngenisa uMculo kwi Isicelo siya kufumanisa ukuba sinazo iifayile kwifomathi ye-.mp3 okanye .wav kwaye iya kusinika ithuba lokuzikhuphela.
Sizikhuphele kwi-iPhone yethu okanye kwi-iPod Touch (ngexesha lokubhalwa kwayo ayifumaneki kwi-iPad).
Kwaye ekugqibeleni, siyivelisa kwakhona.
Icala elisezantsi kukuba asizokwazi ukudlala umculo kwisicelo se-Apple sendalo. Into elungileyo kukuba iJukebox kubandakanya umdlali oko kuyasivumela ukuba silawule ilayibrari yomculo yethu yonke. Kwaye konke oku simahla.
Enye indlela yokusasaza umculo ngaphandle kokusebenzisa i-iTunes okanye intambo yombane kukusebenzisa ilifu elisebenzisa inkonzo eyaphehlelelwa ngu-Apple ehlotyeni ngo-2015. Kodwa kufuneka ugcine into enye engqondweni: ukuze ukwazi ukusebenzisa i-Apple Music kufuneka ubhalise. kwinkonzo, okanye nokuba yeyiphi na imo nganye enexabiso le- € 9,99 / ngonyaka okanye ingxelo yosapho ye- € 14,99 / ngonyaka. Oko kwathethi, iApple Music ibandakanya ukhetho lokukhuphela nayiphi na ingoma okanye ialbham abanayo kwinkonzo yabo, kwaye nathi sinokuzikhuphelela umculo esinawo kwiTunes yethu kwaye ungqamaniso lwelayibrari iCloud.
Ukukhuphela uMculo kwiApple Music kulula kakhulu kwaye kuya kuxhomekeka ekubeni sele sinayo kwilayibrari yethu okanye akunjalo:
Ukuba sifuna ukukhuphela umculo masibe kwilayibrari yethu iCloud, kuyakufuneka siphathe amachaphaza amathathu (…) ecaleni kwengoma nganye okanye ialbham kwaye kwi icon yelifu kunye notolo olusezantsi.
Ukuba ingoma Asinayo kwilayibrari yethu ICloud, endaweni yesimboli yelifu siya kubona uphawu lokudibanisa (+). Ukuthinta kuyongeza kwilayibrari yethu. Nje ukuba songezwe, siza kubona ilifu kunye notolo olusezantsi kwaye ngoku sinokuzikhuphelela ukuze simamele ngaphandle kweintanethi.
Ungazihambisa njani iingoma kwi-iPhone ngo-WhatsApp
Ngelishwa, i-WhatsApp yayiyeyona myalezo wokuqala wokuvela, kodwa ikwayeyona icothayo kuphuhliso. Okwangoku (ngo-Matshi 2016), ubuncinci kuhlobo lwe-iOS ayivumeli ukuthumela okanye ukufumana iingoma nguWhatsapp. Kutshanje bakhuphe uhlaziyo olusivumela ukuba sithumele amaxwebhu ePDF kwaye ezinye iintlobo zeefayile ziya kuba nakho ukuthunyelwa kungekudala, kodwa kuya kufuneka silinde uhlaziyo olutsha. Kungekudala okanye kamva, i-WhatsApp iya kuhambelana nokuthumela naluphi na uhlobo lweefayile.
Ukuba ixesha lifikile xa sivunyelwe ukuthumela umculo ngu-WhatsApp, ukuwuthumela siya kudinga izicelo ezinje Ukuhamba komsebenzi. Ukuyifumana, nangona sinokuyivelisa kwakhona ukusuka kwisicelo ngokwaso, into enokuba nomdla kuthi kukugcina iingoma, ke siza kufuna usetyenziso olufanelekileyo, njengomdlali VLC okanye nawuphi na umdlali oxhasa iifayile ezimanyelwayo.
Ngaba umculo ungadluliselwa kwi-iPhone ngeBluetooth?
Hayi. I-Apple yinkampani ekhathalela kakhulu ukhuseleko lwabathengi bayo kwaye iBluetooth yitekhnoloji ephelelwe lixesha (yokuthumela iifayile) enokuba yingozi. Le yinto kudala ndiyithetha, xa umnxeba kasibari wazama ukuthumela umninawa wam (umyeni wakhe) ifayile ngeBluetooth xa ifowuni yayindodwa. Ngamanye amagama, intsholongwane izame ukuzithumela kwezinye izixhobo xa kungekho mntu uyichukumisayo. Ngokusengqiqweni, umamkeli wabona ukuba umhlobo wakhe ufuna ukumthumelela ifayile, uyakuyamkela kwaye azosuleleka.
Ngale nto icacisiweyo, ukuhambisa umculo kwi-iPhone kufuneka sisebenzise isixhobo esisemthethweni ukuba sifuna ukuyidlala kwisicelo se-iOS yemveli. Ukuba akunjalo, singasoloko sisebenzisa usetyenziso olufana neDropbox okanye iJukebox.
Ezinye iindlela zokuphulaphula umculo ngaphandle kweintanethi kwi-iPhone
Xa sithetha ngezinye iindlela, eyokuqala ekufuneka sithethe ngayo kuba yindawo eninzi kwaye ixhaphake kakhulu Spotify. Ngokuqinisekileyo sele uyayazi inkonzo, kuba yeyona inenani elikhulu labasebenzisi kodwa, ukuba kunokwenzeka ukuba ubukwisiqithi esiyintlango kwaye uyazi kuphela inkonzo eyaphehlelelwa ngu-Apple ehlotyeni elidlulileyo, ndiza kuthi Spotify yi ngokufanayo neApple Music, kunye nethuba lokumamela umculo ngaphandle kwe-intanethi, kunye neengcebiso, kunye nethuba lokwenza uluhlu kodwa, yintoni engcono kunye nento inkonzo ye-Apple enganikiyo, yiyo iqonga lokuwela. Ngaphandle kwamathandabuzo, i-Spotify lukhetho olukhulu kwabo bafuna indlela yokudlulisela umculo kwi-iPhone ngaphandle kokucinezelwa.
I-Spotify iyafumaneka kwiWindows, kwiLinux, kwiMac, kwi-Android, kwi-iOS nakwezinye izixhobo, ezinje ngeebhokisi ezisetiweyo kunye nokudibanisa. Ngokwenani leefayile, iSpotify ijikelezile 20 million iingoma, ngaphezulu okanye ngaphantsi ngokufanayo neApple Music. Kwelo xabiso sinokufumana phantse yonke into, nangona kuyinyani ukuba kukho amagcisa athe athambekele kwinkonzo ye-Apple ngokunganikeli nayiphi na indlela yasimahla, njengoko kunjalo nakwimxholo othile ovela kuTaylor Swift.
Nangona ungaluthandi uluvo, uGoogle ukwabonisa ukuba kungenzeka ukuba ulayishe iingoma zethu kwinkonzo yasimahla esivumela layisha iingoma ezingama-50.000, eqinisekisa ukuba singagcina ilayibrari yomculo yethu yonke kwinkonzo yakho, okanye ubuncinci kwimeko ezininzi.
Singazilayisha iingoma zethu ngendlela esinokuthi senze ngayo kulo naliphi na ilifu kwaye siyidlale, ngokuvakalayo, kuya kufuneka ukuba sibe nesicelo Google Play Umculo efakwe kwisixhobo esifuna ukumamela kuso.
Kwelinye icala, ikwanendlela yokubhalisela enexabiso elifanayo le- € 9.99 ngenyanga ngenyanga enayo iSpotify okanye iApple Music. Icala elisezantsi lelokuba, ukuba ucwangcisa ukuhlawula, inkonzo kaGoogle isekude ekunikezeleni isixa seengoma ezinikezelwa nguSpotify okanye inkonzo yokusasaza umculo ka-Apple, ke andizukuyicebisa.
Ngoku ubonile ungawutshintsha njani umculo kwi-iPhone Ngeendlela ezininzi, eyona ilungileyo yeyona isemthethweni, kukusebenzisa iTunes. Ukuba awufuni ukusebenzisa isixhobo sika-Apple, kuya kufuneka ujonge ezinye iindlela, nganye ineenzuzo kunye nezibi. Yeyiphi indlela oyithandayo yokongeza iingoma kwi-iPhone?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ungawutshintsha njani umculo kwi-iPhone ngaphandle kwe-iTunes
Izimvo ezi-172, shiya ezakho
Ewe, i-iTunes indinika ingxaki ngamanye amaxesha. Ndifumana impazamo "ixesha lokuphuma liphelelwe lixesha" into enjalo, andikhumbuli kakuhle.
Kodwa kwenzeka kum xa ndizama ukuvumelanisa izinto zam kwi-iphone
yingxaki intambo yakho okanye uqhagamshelo lwe-USB, jonga
utshintsho lwam lukwimeko egqibeleleyo. Kwaye andicingi ukuba i-USB kungenxa yokuba xa ndidibanisa i-iPhone ngaphandle kwesidingo sokuvula i-iTunes, ifowuni yam ayicimi, oko kukuthi, ibhetri iyasebenza ngokutsha ngalo lonke ixesha, ibonisa ukuba i-iPhone ayicimi nangaliphi na ixesha.
Andazi ukuba inokuba yintoni ...
Ndiza kuzama ukufaka i-iTunes d kwakhona
izakusebenzela ipod touch ??
Ndinengxaki nge-ipod yam engama-60GB .... yonke le nto iqale xa ndiyibuyisela .... bengaqondanga..yacinywa kwaye xa ndiyidibanisa ayivumelanisi ..... ipc yayifomathiwe ngaphambi umcimbi..ndifuna uncedo urrrrrrrgent ....!
Ndingathanda umntu andincede ndibuyisele imeko ye-iphone ehlaziyiweyo kwaye ngoku ichip yam ayindamkeli
Sukuyithoba, ayifanelekanga nge-chingada emsulwa, bubuqhetseba, vele uthambise i-winamp ukuba ilungile
Ewe ndicinga ukuba ndiyifumene indlela yokudlulisela umculo kwi-iPhone ngaphandle kwe-iTunes. Andazi ukuba iya kuthunyelwa apho, kwaye andikayizami.
Ndisebenzisa inkqubo ye-p2p iSlsk yokukhuphela umculo, emva koko le nkqubo ingenisa ii-mp3s kwi-iPod. Kodwa phaya ngekhe uzikhuphele zonke iingoma, kwaye andiziva ndingqamanisa kwaye ndilahlekelwe ziingoma endizikhuphelileyo. Ndiye ndacinga ukuba xa ndibeka i-mp3 nge-ssh kwifolda yokukhuphela yeSlsk kwaye ukuba yamkelwe, ndiza kuyivula ndiyingenise kwaye yiyo leyo!
Sele ndiyizamile, iyasebenza !!! hehehe, kanye njengokuba benditshilo, andazi ukuba umntu sele eyibekile. Inyani yile yokuba kubonakala kum kulula kwaye iyindlela ekhawulezayo, imibuliso!
«EEDDY» Umhlobo olungileyo ndinengxaki efanayo neyakho kodwa ndiyisombulule ngokulula, ngoku ndine-iphone yam kwinguqulo 2.1 kwaye ndisebenza ngaphandle kwengxaki thumela i-imeyile ukuba usafuna uncedo imeyile yam yile master.phone08@yahoo.com.mx sala kakuhle.
AKUSEBENZI KUM, UNGANDINCEDA UKUDLULA UMCULO KWIPHONE YAM? KWAKHO NDINGATHANDA UKUBA NEREKHODI NDINGANAYO
Ayisebenzi kwaphela, sele ndiyenzile ngaphezulu kwamaxesha e-10 kwaye akhonto
Ndididekile yi-ipnone 3g kuba bekunzima kakhulu kum ukukhuphela umculo kuba i-itune ayihambelani nezinye iinkqubo ezifakwe kwikhompyuter yam, ngoku iyandixelela ukuba kufuneka ndifake kwakhona i-iTunes kuba kwenzeke impazamo .. . ANDINAKO UKUBA NDIZA KUHLAWULA ... umntu andicacisele ....
Inyani yile yokuba ekuqaleni bendiphoxekile kodwa emva koko kulungile. Ekuphela kwento ekufuneka uyenzile kukubeka ikhadi lakho letyala phambi kwenkqubo yengqondo, kodwa ke iyahlaziya ngomculo onawo kwiPC yakho. Sele ndinayo i-8gb yomculo kunye neefoto ezininzi kwaye ngamafutshane, nangona ithenwa (ibluetooth, mms) Ndonwabile ngayo: iyasebenza, kulula kakhulu ukuyisebenzisa.
UUUUUUU Ngubani othi ayisebenzi…. Ewe iyasebenza kwaye igqibelele… ilunge kangakanani kuba ndiyayithanda kwi-iPhone yam kodwa ndiyayicaphukela itunes… Enkosi kakhulu ngegalelo…. Ubomi obumsulwa…
ricardo ukuya sitsho
inokucaciswa ngakumbi, ukuba ungawukhuphela njani umculo kwi-winamp ukuya kwi-iphone. kutheni ungachaphazeli, akukho sicelo soko.
Phendula u ricardo a
adriana elizabeth gnlz amz sitsho
Ifowuni yam ayinakukhuphela iifoto zam, ndenza njani?
Ngaphambili, bendihlala ndiyilungisa kuphela kwikhompyuter kwaye iifoto zabonwa kwi-pc yam kwaye ngoku hayi: S k ago !!!! plzzzz
Phendula ku-adriana elizabeth gnlz amz
Akukho mveliso zibi, kukho abasebenzisi ababi. Kum isebenze ngokugqibeleleyo kwaye ngaphandle kwengxaki.
Ukuba abayazi indlela yokuyisebenzisa yenye into, kuya kufuneka ufunde abahlobo kwaye ufunde ikhompyuter encinci yesayensi.
Musa ukuba nomsindo sonke sidinga uncedo ngenye imini uyokwazi okuninzi malunga neekhompyuter kodwa awuncedisi nganto kwaye uyathuka andazi kwanto kodwa ndiyafana nabahlobo bam, akandivumeli ukuba ndiyivumelanise kwaphela Damn itunes sele kukho amakhadi etyala ayi-7 kwaye uyala ukunceda mna hayi Kungenzeka ukuba le fowuni intle kangaka inzima kwaye khange athethe ngomculo kodwa i-jeilbreack kwaye uyikhuphe eyahlukileyo kuba ikhululiwe ungayibeka imixholo kuyo isebenza njengekhamera yevidiyo kwaye isoftware yakho yenziwe ngcono kwaye uyayichitha kwaye ngoku u-telcel uthe iya kuqokelela ukuvulwa kwethambo leedola ezingama-80 phakathi kwe-870 yaseMexico i-pesos averrrrrrrr isincede singasigxeki ukuba uyazi ukuba sinceda njani siyakuxabisa bonke abo bangevayo tigro123@hotmail.com Ewe, ukuba ndingashiya apho abahlobo ubuncinci? Hahaha
Gilbert kuya kufuneka uzazise ngcono ngaphambi kokugxeka imveliso, phantse zonke izinto ophawula ngazo iphone zinokuyenza.
SEKUKHONA ukuluhlaza, ukudlulisa nayiphi na ifayile, iifoto, iividiyo, umculo ...
IREKHODI ESELUNGILEYO, eneapp elula
UKUBA unomthunywa, mms,….
Ndikucebisa ukuba uhambe kuyo nayiphi na iforum ye-iphone, funda kancinci ...
Inezimbungulu, ewe, kodwa ziyasonjululwa, kwaye ukuba ukuphuma kwe-iPhone kwakusemva kolu hlobo lwezinto nezinye izixhobo, kancinci kancinci iphambi kwezinye, ngakumbi ngohlaziyo olulandelayo.
IManolo (FOX) sitsho
Kukho abantu abangakhangeliyo okanye bangazisi nge-ipod yam ndibeke zonke izicelo uGilbert athi akanazo kodwa ukuba ndibeke iBlueTooth, irekhodi leVidiyo, Isandi sibeka amaphephadonga, ndiyifaka emotweni endimamelayo. ngaphandle kwee-headphone kwaye inesandi esilinganayo okanye esingcono kunesona selfowuni siphambili kwintengiso.Ndivakalelwa kukuba le ndoda ingathanda ukuba inikwe yonke into ngaphandle kokuthatha inkathazo ukuyifumana kwaye iphande kancinci kwaye umoya woluntu…
Phendula uManolo (FOX)
Uxolo kumagqabantshintshi ndibeke i-ipod kodwa ngokwenyani yi-iphone, ndine-iphone 2g ene-firmware 2.1 kwaye yonke into isebenza kakuhle kakhulu kwimidlalo, kwi-intanethi, kubathunywa, kwi-imeyile, kwi-seismograph, kwinqanaba elifutshane njengezicelo ezingama-70 ezenza esi sixhobo sibe sesona uyilo kude kube ngumhla.
Andikwazi ukuvumelanisa i-iPhone yam, ndenza njani?
Ukupasa umculo yeyona nto ilula ikhoyo yindawo yokwabelana, kufuneka netframework 2.0
Ungazikhuphela njani izicelo ze-iPhone 3g ye-8g okoko e-Bolivia ukuthengiswa kwezixhobo akuvumelekanga kwaye andinaso isitshixo sokukhuphela imidlalo nabanye
UBernal Garcia Pereira sitsho
Ndingavuya kakhulu xa unokundixelela: NDIWUPHELISA NJANI UMCULO?
Phendula uBernal Garcia Pereira
Mholo! Ndingathanda ukwazi ukuba ndenza njani, ukuhambisa umculo ukusuka kwi-itune ukuya kwi-iphone, bendine-1.4 kwaye ndiyiguqulele ku-2.1, xa ndiza kugqithisela umculo endinawo kwifolda ye-itunes!, Ibonakala kum ukuba andinakho kwaye kufuneka ndihlaziye, ndenze ntoni? Enkosi
Molo, ndicela undixelele ukuba ungawucima njani umculo kwi-iPhone, indlela yokuhambisa iifoto kunye nomculo ngokusebenzisa izinyo eziluhlaza ukusuka kwi-iPhone yam ukuya kwenye iselfowuni ngaphandle kwe-iPhone, kwaye uthethelele ukungazi kwam, enkosi ...
pz inetha iphone ez eyona ipod ifowni ke ai emarikeni zeen ambargo inezinto ezininzi ezingaphumeleliyo ngokomzekelo ize ibrackbrake kwi-iphone yam i baaa ze yonakele iaz not azepta zim into endiyenzayo yandinceda korreo yam dars_gx@hotmail.com
Molo, ndingathanda ukwazi ukuba loluphi ufakelo ekufuneka ndilubekile ukuze iBluetooth isebenze ... Ezinye izinto ezi-3 hehe mxtube wam akandivumeli ndikhangele okanye ndikhuphele iividiyo ukuba kukho umntu owaziyo ukuba ndenze ntoni 2 ndingazibona njani iifayile zam ze-pps kunye no-3 ndingazitshintsha njani zibe yiSpanish kwimenyu iilwimi ezingafikiyo: Enkosi ngoncedo lwakho kwangaphambili
Ngelishwa i-iPod_ML ayisasebenzi ngohlobo lwe-firmware OS 3.0 ngalo mzuzu .. sizakuhlala silindile!
NdiseArgentina kwaye bendikwi-1G kanye ngosuku olu-3. Ndikufumanisa kuyinto entle ... Kulula ukuyisebenzisa kwaye inobuhlobo kakhulu. Enye yazo yayihambelana ne-Itunes yencwadi yokubhalela (kunye noWin Vista) kwaye ndakwazi ukuwudlulisa umculo neefoto ngokugqibeleleyo. Into ebendingasakwazi ukuyenza kwaye ndiyathemba ukuba bandinike isandla injenge !!!! ZISUSE KWIPHONE !!!!!
Imibuliso kubo bonke kwaye enkosi kwangaphambili.
Akukho mames, yeyiphi i-tutorial ngale ndlela ndiwupasa ngayo umculo uthatha amanyathelo, ungandixeleli ngaphezulu kwe-fuck ekufuneka ndiye ezantsi, ngoku amanyathelo okuyisebenzisa
AMNER SANCHEZ sitsho
Molo, ndibuhlungu ukuyithetha kodwa ndiluhlobo lomntu olungileyo kule telephony kwaye ndifuna ukubona ukuba umntu angandikhokela na.
Ndithengile iphone kodwa andikwazi ukukhuphela umculo kwi-ipod yefowuni, akukho midlalo okanye umculo kwiishuni.
Njengoko uza kubona, zii-suitcase kakhulu kodwa ukuba umntu unokundinceda ndiza kumnika kakhulu.
Phendula kwi-AMNER SANCHEZ
Hee undazise into entsha ngale ngxaki ye-OS 3.0 kuba ndiyikhuphile i-itunes yam kwaye i-bonjour indenzela iingxaki kwaye andinakukwazi ukuyifaka kwakhona i-itunes !! Ndicela undazise ukuba ikhona enye indlela nge-OS 3.0 ... iphone PC Suite ..
Khuphela iplagi yeWinamp, kwaye uqhagamshele i-iPhone, ikhompyuter iyayibhaqa, kodwa xa ndivula iWinamp ndigqithise iifayile andisifumani isixhobo! iitoni apho ndenza ntoni ???
Sele ndiyifumene inguqulelo ye-3.0, ndiyawupasa umculo kwaye kwi-winamp kubonakala ngathi sele zilayishiwe .. Kodwa ndingena kwi-iPod ye-iPhone kwaye akukho nto ivelayo .. Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba kutheni? Ngaba upasa umculo kwaye ke ndibone into endiyenzileyo. enkosi
ungazenzi nzima, ukuba kulula kakhulu:
Inkqubo yokufaka iingoma isimahla. kwaye inomdla, ukuba unayo nayiphi na imibuzo undixelele imibuliso.
nangona une-iTunes, ukuba ubeka ukhetho "lokulawula umculo ngesandla", ihamba kakuhle, akusafuneki, kodwa apho ndishiya enye indlela yokukopa endizamile kwaye isebenza kakuhle.
hello ps ndinengxaki ndifuna ukushiya i-mucica kwifowuni yam yi-8GB kwaye ndifuna ukwazi ukuba bendikhuphela ntoni i-mucica ngaphandle kwentambo ye-USB k ngakumbi kwaye ndingena kwiphepha kuphela kwento endiyathemba, undixelele
INYANISO YAYINGENAKWENZEKA UKUBA ICANDELO LOKUFANELEKA KODWA NDALANDELA AMANYATHELO KANYE NET YABHALA INGXELO YAKHO UKUPHONONONGA KWAKHO ENKOSI NGAPHAMBI KWE-WINANP NE-IPOD KUNYE NOKUBULELA
Grax amadoda, isebenza kakuhle nge-16 GB iphone =)
Ukuba oku kusebenza nesizukulwane sangoku i-nano, kukuba i-pc yam yatshiswa nge-iTunes kwaye ngoku andinakuyivumelanisa ne-xq entsha indibuza idiski kwaye ndifuna ukwazi ukuba umxholo ungadluliselwa apha kwi ipod xq Ndifuna ukucima oko inayo kwaye ndathi ewe kodwa ithi: idiski ayifumanekanga mpazamo
Ndifuna ukuthengisa iphone enye
Inombolo yam ingama-2657-649464.Nxibelelana ukuba kukho entsha kodwa kufuneka ndiyithengise ngeemfuno ???
Tassad @ r! sitsho
Molo ... ndingathanda ukwazi ukuba ndibeka njani umculo wam kwaye ndenze izinto nge-iPhone yam ngelixa ndineLinux ...
Ndine Ubuntu 8.04.
Phendula ku Tassad @ r!
Kulungile umntu undinike enye yezo iphoni ziyalinganisa (ndiyathetha inkohliso, ipirate) ndinayo ixesha elide kwaye andiyisebenzisi kodwa kuba ine-16 GB ndiza kuzama ukuyivavanya ndigcine umculo njlnjl. kukuba andazi ukuba okanye yeyiphi inkqubo esebenza kolu hlobo lweefowuni zepirate, ungandinceda? Ndiwudlulisa njani umculo ukusuka kwi-pc yam ukuya kwifowuni
molo ndifuna ukubuza iphone yam ayiveli kwi-winamp kwaye ndizibuza ukuba kutheni? Ndidinga ukufundiswa indlela yokudlulisa umculo kwi-clu yam hayi c indlela yokwenza i-kda oyibonayo ndidanile ngakumbi nge-iphone
I-UPPPZZSS NDIYIFAKILE NDAYITSHINTSHA YONKE IMIFANEKISO YE-MP3 ENDIYALELE NGUMYALELO NGABASEBENZI NGENXA YOMNTU AKAZI
ITalca, eChile sitsho
Ngaba unganika ukulandelelana kwendlela yokudlulisa umculo kwi-ipod / okanye iphone, enkosi 😀
Phendula iTalca, eChile
I-iPhone ilunge kakhulu kodwa ndenza njani ukuze ndirekhode ividiyo yi-3G 8gb
Ucima njani umculo ??? nceda, ndineengoma eziliwaka andifuni
Ndine-iPhone kodwa eyam iyacotha, ndingayenza njani ukuba ikhawuleze?
Inkqubo yokufaka emva kwe-winamp ngokwenene yiTrojan ... LUMKELA !!!
Ayizundivumela nokuba ndifake i-ipod ye-ml kuba ithi inengxaki zokubhala okanye andazi ukuba yintoni
BONKE KAKUHLE IPHONE KODWA KUFUNEKA IQHUBEKE NGOKUQHELEKILEYO OKANYE NJENGEZO ZINYE IZIXHOBO ZOKUFAKA UMCULO KUZO ..: /
Andiqondanga ukuba ngubani ondifundisa ngcono?
iibhilidi zewilinton sitsho
Ndifuna inkqubo yokukhuphela umculo kwiselfowuni yam
Phendula kwi-wilinton bastidas
Ndingathanda umntu oza kundinceda ndithobele iithowuni zeselfowuni.I-iTunes inzima kakhulu.
Ngaba umntu angandixelela ukuba ndiyidibanisa njani i-iPhone yam nenye iselfowuni ngeBluetooth ukuyidlulisa imifanekiso nomculo?
Kulungile i-Crystian, iapile iyakhweleta ngenxa yeemveliso zayo kwaye ukuza kuthi ga ngoku ndicinga ukuba akukho ndlela yokwabelana ngeefayile ngeBluetooth nezinye iiselfowuni ngaphandle kwe-iphone.
Ukuba kukho umntu owaziyo ukuba kanjani, mandazise nam.
Molweni nonke, ndine-ipod yeklasi ye-80gb kodwa ndifuna ukubeka umculo kunye neemovie kuyo, kodwa i-iTunes ayindivumeli iimovie, iividiyo kunye nomculo, umntu angandixelela ngaphandle kokuya kwi-iTunes
Ukuba ufuna umculo we-basjar, iimuvi okanye nantoni na oyifunayo, khuphela i-ARES yinkqubo yasimahla kodwa kuya kufuneka uyikhangele kuba zininzi iinguqulelo, nceda, ukuba umntu ufuna ukundinceda, ungandibhalela kule dilesi. . faoe@live.com Ndiyabulela
Kuba ayisebenzi, isebenza ngokumangalisayo.
Molo, bendisandula ukuthenga i-iPhone 3g yam, ndiyixhume nje emathangeni ndavula i-iTunes kwaye ngalo mzuzu zonke iingoma ebendinazo kwi-limewire zigqithisiwe ... kwaye ngalo lonke ixesha ndikhuphela ezitsha kwi-limewire endiyenzayo ingqamanisa iingoma kwaye iyodwa ikopi yeengoma
antonio ortiz sitsho
Molweni nonke, zihlobo ezintle, kisiera, jonga ukuba umntu angandinceda na okanye andixelele ukuba ndingayikopa njani imidlalo kunye nalapho ndiyikhuphela khona simahla kwi-ipod yeklasi ngaphandle kokuya kwi-ITUNES ecaphukisayo engaphezulu kwe-ayada kukutsala kuba Inkqubo ithatha ixesha elide Ayilungelelanisi ngokukhawuleza okanye ayifuni ukunqamla ipod berry ukuba inika abahlobo abalungileyo abacaphukisayo ukuba umntu angandixelela ukuba ndingayikhuphela njani simahla kwaye ndingazikopa phi kwi-ipod kwaye ngaphandle kokuba yiya kwi iTunes ndiyabulela ngenkathalo kwaye enkosi kuyo yonke imeyile yam antoniortiz1967@live.com
Phendula u-antonio ortiz
Molo, ndinombuzo omnye, ngaba iifayile zingapasiswa ngeBluetooth kuyo nayiphi na
Molweni nonke, ungandixelela ukuba ndingayidlulisela njani imidlalo kwi-ipod yeklasikhi ngaphandle kokuya kwi-iTunes, kuba inengxaki enkulu, ndicela undincede, yile imeyile yam, enkosi ngequbuliso, elinye iphepha lokukhuphela imidlalo yasimahla
UPHUMELELE UKUFAKA ISIFUNDO ESINCINANE NGENDLELA YOKUDLULA UMCULO KWI-PC YAM KWIPHONE NGEWINAMP
UJoseph l sitsho
ungawudlala umculo wakho ngegolide yomdlali wokwenene ngaphandle kwengxaki
Phendula ku jose l
I-bastard ka-El Zafari ayindivumeli ukuba ndikhuphele naziphi na izicelo, ndicinga ukuba kuya kufuneka ndithenge i-motorola droid, ayiniki ngxaki zininzi njenge-iphone, i-itunes ixhonywe enye, yikhulule intambo kancinci kubasebenzisi, enkosi
Ukuba iphone yakho ivuliwe nge-cydia unokukhuphela usetyenziso olubizwa ngokuba yi-installous. Nje ukuba ifakwe, i-icon efakayo iyakusa kwiphepha apho unokukhuphela khona usetyenziso kunye nemidlalo. Zama oko ndinengxaki efanayo. Ahhh enye into, ngaphambi kokukhuphela ezi fakelo kufuneka uzikhuphele (ukuba uyifakile) i-safari dowmload plug-in. Ndiyathemba ukuba oku kuyanceda
Le ikaka bayizilileyo ayifanelekanga, njakazi, awunamsebenzi nje ukuba bayifake kuwe
Andazi ukuba ndiwudlulisa njani umculo usuka kwikhompyuter uye kwiipod touch yam kwaye ndiyazibuza ukuba ndingawudlulisa na umculo ukusuka kwiselfowuni ukuya kwi-ipod yam
Ingelosi uValek sitsho
Umphathi wam uthenge i-iPhone 3GS, bayinika ivuliwe kwaye inomculo omncinci kakhulu, undibuze ukuba ndingongeza umculo kodwa xa ndisebenzisa i-iTunes ndizama ukongeza umculo, undixelele ukuba kuzakufuneka ndiqale ngokutsha kwaye ndicime yonke Ulwazi oluvela kwi-iPhone ukuze lukwazi ukuphinda luyimise kwakhona, umbuzo wam kukuba ukuba zonke izicelo ezongeziweyo, iifoto kunye nezinye izinto ziyacinywa, ngaphandle kwalonto ukuba ndiyayiqala kwakhona, inokuphinda iphazamise kwakhona? umntu unokundicebisa. Enkosi.
Phendula u-Angel Valek
I-Corduroy Angel Valec iyakuyiqala ngokutsha iseli yakho ngokupheleleyo, ibhetele ifake i-cydia kunye nohlobo lwamva nje, kungenjalo uyayivimba
ioo ndinayo intambo ye-USB ikwimeko efanelekileyo ... Andifumani ndawo okanye ndinento endiyenzayo ukuvumelanisa iividiyo ezintsha, iimuvi njl. Andazi ukuba kwenzekani ... ngaba umntu unokundinceda ??? ndiyacela!!
Ngaba le nkqubo ilungele i-IPODS, ngokubanzi? , Ndithetha ipod touch, ipod nanno .. njl ???????
ukuba uDaniela usebenza ngokugqibeleleyo kwaye zininzi ezinye ezisebenza ngokufanayo ne-itunes
Ndizifake nje ezi zicelo zimbini…. Kodwa ndine iTunes kwikhompyuter yam ... kwaye xa ndigqiba ukufaka esinye isicelo esiyi-ml_iPod ithi i-winamp ikhubazekile. Andiqondi…
Ndiselapha eUruguay ndimamele ispica 8radio9 yexhegwazana kuba le crap inzima kodwa ndilungile kuyo malunga neapile etyibilikayo kodwa yile nto inexabiso
Andikaqondi nangoku, ndayehlisa kodwa andazi
KULULA, KHAWULEZA KUNYE NOKUTHUTHEKISA, NJENGOKUBA UTSHAYELE UTHUMELE, JONGA UMDLALO EMVA KOKUNXIBELELA IPHONE KWICANDELO ELIPHAKAMILEYO EBONAKALA NGOKUZENZEKELAYO XA UKHETHA ISICWANGCISO ,, EMVA KOKUKHETHA (UMthwalo WOMCULO) COFA UKULINDELELA 8 WOMCULO, KAKHULU 1 ,,,,,,
Kuyahlekisa, ndiwudlulisile umculo kwi-Ipod, yangqanyaniswa, ndikhuphe ... Ndijonge kwi-ipod kunye nanai, idiski enzima igcwalisile kodwa ayamkeli ngoma ibenye. Ingathi ayinanto kodwa ine-hd epheleleyo ... ilungile.
Utata ukuxelele ukuba ngomso ndizokuxelela ukuba awuzukunika
Molweni nonke, ndiyabona ukuba unengxaki kwi-ipod xa kufikwa kumba wokudlulisa umculo ukusuka kwi-pc ukuya kwi-ipod okanye ngokuchaseneyo:
Kufuneka udibanise i-ipod kwi-pc, sivule i-pc yam okanye ikhompyuter ixhomekeke ukuba sine-xp okanye i-vista, sicofa kabini kwi-ipod icon, kwaye isikhombisi sayo seengcambu siya kuvula, ngoku ngoku kufuneka sitsale ifayile okanye isikhombisi esifuna ukuba sikhombise ingcambu ye-ipod.Sivula ii-itunes kwaye nqakraza kwifayile, xa usihla ezantsi sicofa kwifayile okanye kwifolda, kuxhomekeke kwinto esifuna ukuyenza, iwindow yokulayisha iyavula, kule sikhangela ikhompyuter yam okanye ikhompyuter, kwaye sicofa kabini kwisimboli se-ipod, isikhombisi seengcambu se-ipod siyavula, sikhetha ifayile esele siyikope kunye ne-voila, esele sinayo ifayile okanye ifolda kwi-ipod yethu ngaphandle kufuneka siyivumelanise ngalo lonke ixesha sifuna ukubeka ingoma enye kuyo okanye ialbham iphela, iividiyo….
Molo mvakwemini ... kulungile bendifuna nje ukwazi ukuba ukhona umntu onokundinceda .. kulungile ndine-3g iphod ye-16 gb .. kodwa kufuneka ndiyibhalise kwi-itunes endiyenzileyo kodwa andikwazi ukuyibuza. mna ngecredit card kwaye andinayo loo nto njengoko ndingayibhalisa ngaphandle kwayo? Enkosi enkosi spro suu phendula enye into, ndingawufaka kanjani umculo kum, andiyiboni inyani, ndidibanisa i-iphod kuphela, ayinanto yakwenza nomculo, akhonto kwaye ndifuna ukuyibeka, kodwa inyani kukuthi, andazi ukuba ndiyathemba ukuba umntu uza kundinceda kwaye, ndicacise imibulelo emininzi ngexesha lakho ekuseni
Kuthekani ukuba ndineMac ??? Ndifuna ukwazi indlela yokudlulisa umculo kwi-iPhone yam ngaphandle kokucima oko sele ndinayo esele ndiyibekile nenye ikhompyuter
johnny umntu obalekayo sitsho
Kungcono uthenge i-compaq, fakela i-iPhone apho kwaye yonke into ezenzekelayo, ingcebiso elungileyo nefanelekileyo, ungakhohliswa, le foram khange indincede tu
Phendula i-fucking johnny
ISAHLUKO 21 sitsho
Hayi ayiyomfuneko leyo okanye thenga nje ikhompyuter kwaye uza kubona iziphumo
Phendula kwi-CHON 21
Ngaba iikhosi zekhompyuter ziyathengwa?
Haha, bendicinga ukuba uhlawula ngokuthatha ikhosi kwaye ufunda, kodwa bendingazi ukuba ndingayithenga
Xa ukuhlawulela into akubizwa ngokuba kukuthenga? ...
N / A sitsho
Ayibizwa ngokuba Thenga xa bekuthengisela yona, okanye xa iyinto ebonakalayo, Uhlawulela xa ziinkonzo, okanye ulwazi lwe-XP
Phendula N / a
yokujola uJohnny sitsho
qonda i-NNNNN aaaaay weeee elo lizwi belingazi hahahaha
IMISEBENZI 100% UKUVAVANYWA KUYENZELELWA
Phendula EL ESO
UKUBA ENYE INTO ESEBENZA EYI-GROSS YOKUSEBENZISA HAHAHAHA
UDiana Karen Hernandez Montiel sitsho
Phendula kuDiana Karen Hernandez Montiel
UMTYHOLI ♥ sitsho
IZINTO ZININIKELA INGXAKI
UMNTU UNGANDIXELELA INDLELA ENDINGAFAKA NGAYO KWIMIFANEKISO
AMI IPOD. NENDLELA YOKONGEZA UMCULO NJENGOKUBA OKU KUVELA KWI-ITUNES KODWA ANDINAKUKWENZA ENYE INTO ENDINGAYENZIYO UKUBEKA UMCULO OKANYE
Phendula kumtyholi ♥
Ndenze yonke into kwaye xa ndivula inkqubo, andizifumani izixhobo kunye ne-iPhone encinci ukuba, ndenza ntoni?
UFernando Dosta sitsho
Kutshanje ndithenge icwecwe lomculo le-iPhone yam, kodwa ngoku andifuni ukuvumelanisa ifowuni yam nekhompyuter kuba ndinoloyiko lokuba le nto ndiyithengileyo iyakucinywa. Into endiyenzayo?
Phendula uFernando Dosta
UMnu Williams Brown sitsho
Inkampani yeXNUMXst Fund Loan (PLC)
Ndiyabulisa makhosi, ntsasa entle, vumelani isingeniso esifutshane kwinkampani yethu inkampani yemali mboleko yokuqala yinkampani ebhaliswe e-United Kingdom kwaye iimali mboleko zethu zamkelwe yiBhodi yababolekisi ukuba inike imali mboleko kwabo bangenalungelo, kunye neearhente zentsebenziswano inzala ephantsi kakhulu kwaye ifikeleleke ngenzala ye-2%.
Fumana okona kulungileyo ngemali yakho. KwiNkampani yeNgxowa-mali yokuQala yeMali-mboleko igcwele ulwazi lwezezimali kunye nexabiso elifanelekileyo kumnatha.
Sinikezela ngeentlobo ezahlukeneyo zemali mboleko
Ikhadi letyala, iiAkhawunti zeBhanki, iiMali mboleko zeBhanki, isicelo seKhredithi, ukuDityaniswa kwamatyala, iNgxelo yeMali mboleko yasimahla
Ubambiso, ukuBolekisa ngemali yokuBambisa, iMortgage Calculator, iRhafu yokuBambisa, iNkampani yokuBambisa, ukuBuyisa kwezeMali
Imali mboleko yobuqu, ezezimali zeKhaya, uMcebisi ngezeziMali, ukuNgabinamali, iMali mboleko ezenzekelayo, iMalimboleko yabafundi eStock Market
Ukurhweba ngeSitokhwe, iiNkcitho zeSitokhwe, uKhetho lweSitokhwe, iMarike yeMali, iiMarike zezeMali, ukuRhweba ngoKhetho
Qaphela ukuba zibonelelwa ukuba zichaze imali (iiYuro, iidola kunye neepawundi). Sityelele ngolwazi oluthe kratya kule (first_fund_transfer@yahoo.co.uk).
Abantu abayifunayo ngenene imali mboleko kufuneka banxibelelane nathi ngolwazi oluthe kratya.
Idilesi: I-39 Stirling House, Simmons Road, Woolworth, London,
inombolo yobhaliso 06763543
UMnu Williams Brown
Phendula kuMnu Williams Brown
Abahlobo… .Banika ukhetho kwi-iphone kodwa i-ipod ikwasebenza nale nkqubo enkosi
Ngaba iphone enesivumelwano seMovistar inokusetyenziswa njengomgca weWifi ukuba ne-intanethi kwiLaptop? Ungazidinga izixhobo? Nayiphi na inkqubo?
I-iPhone yam yi3.5 kodwa andazi ukuba ndingazifaka njani okanye ndizicime njani iingoma ... xa ndiyidibanisa, iphuma ngokungathi bendidibanise ikhamera yedijithali kwaye akukho nto iphuma kwindlela yokufaka okanye ukucima umculo okanye iividiyo .. .... ndenzeni ?????? ????????????????????????????????????????????? ??????????? ????????????
Kulula kakhulu kufuneka unxibelelane ne-iphone kwikhompyuter emva koko ujonge ifayile yenkqubo yekhamera okanye into ebonakala ngathi iyavumelanisa ivula i-winamp kunye nesidlali semidiya semidiya ukukopa iingoma kwaye uziguqulele kwifomathi eyimfuneko emva koko uye ku winamp kwaye ubeke iingoma kwaye iya kuba yi-100% ukuba ayizukuphuma kuyakufuneka uyithathe ukuze uyijonge okanye uyizike ngenye indlela ukuba ayivuli kwanto kuya kufuneka ukhuphele iTunes
Mabel dominguez sitsho
Nceda undixelele amanyathelo amele ukulandela ndine-iPod nano kwaye ndifuna ukudlulisela umculo kwifowuni ye-iPhone 3gs
Phendula mabel dominguez
Ngaba umculo sele ucinyiwe?
Bafo abalungileyo, qaphela ukuba ndifuna ukukhuphela iividiyo kwi-iPhone yam kwaye ingxamisekile, ndithetha ngeevidiyo ezirekhodwa, ndiyazi ukuba ubuncinci inkqubo yokwenza, kufuneka ndiyikhuphele ngokungxamisekileyo , le ibiyenzelwe ingomso, ngaba ukhona umntu owaziyo? UncedoPpppngokpngokpngokpngokajpjngokngqngqqqqqqqqqqqqii
Molo, ndinefowuni ye-3G kodwa andazi ukuba ndingawubeka njani umculo kuyo.D: Ungandinceda ukuba ndiwubeka njani umculo kwikhompyuter yam
ooolas wonke umntu, ndinayo iphone kodwa andinayo ilaptop okanye ipc kwaye ndifuna ukukhuphela umculo kwiselfowuni, ndingayenza, ndiyenza njani?
ukuthintela iingxaki ngcono ndizisa irekhoda eneebhetri hahahahahaha
Ndingazibona njani iividiyo ezivela kwi-ext. wmv. wav njl njl kwi-iphone yam xa ndibadibanisa nemiyalezo ebhaliweyo.
UMiguel Montañez Fleitas sitsho
Kukho usetyenziso lokuhambisa iifayile ezinje ngomculo, iifoto, kunye neevidiyo ezingekho kwivenkile yaseCydia.
Phendula uMiguel Montañez Fleitas
Molo, ndifuna uncedo, ndiphume elizweni kwaye ndifuna ukuhambisa umculo kwi-iPhone yam ndiye ndafaka i-iTunes kwenye ikhompyuter, kodwa xa umculo uye, yandixelela ukuba ndicime eyangaphambili.
Molweni zihlobo, ndithenge i-iphone 3GS 32 gig kwaye ndingathanda ukudlulisa umculo usuke kwi-pc uye kuwo. Kunzima kum kwaye andiveli eCañi Spain. Ngaba ukuba undixelele ukuba ndenze njani.
ujustin bieber sitsho
Ndifuna i-mucica DeJuStIn BiEbEr
Phendula kuJustin Bieber
UFrancisco Rodriguez sitsho
Ngaba uyayifuna imali-mboleko. Ukuba impendulo yile
Umbolekisi osemthethweni kunye neziqinisekiso zemboleko. Siyinkampani yoncedo, iimali mboleko zeNgxowa-mali kubantu abadinga uncedo lwemali, ndingathanda ukusebenzisa le ndlela ukukwazisa ukuba wenze indlalifa ethembekileyo yoncedo njengoko ndifuna ukonwaba kubandakanya ukubolekwa kwemali
* Ukudityaniswa kwetyala lemali mboleko
* Ityala lemoto
* Imali mboleko zoShishino
* Imali mboleko yomntu.
Bhala entsha ukuba unomdla ngenqanaba lethu lenzala
Mr,. UFrancisco Rodriguez
Phendula uFrancisco Rodríguez
Yeyiphi inkohliso ethelekisaeeeeeee ayisebenzi worhaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!
Ngaba omnye umntu angandixelela indlela yokudlulisa imixholo kwi-iphone 3g enkosi
Phendula ku kleiber
Ndine iphone eyi-32 g kodwa andazi ukuba ndiwudlala kanjani umculo, ndicela undincede
Ndiwalandele onke amanyathelo kodwa ngokuvulwa kweWinamp andiboni naluphi na ukhetho lokuhambisa umculo kwi-iPhone
ewe nje pokito maz ... ps ...
NDINENGXAKI NE-3 GB IPHONE 16G YAM KWENZEKA UKUBA ANGEKE NDIBEKE UMCULO OKANYE IIVIDIYO KUYO NGOKUBA KE NDIXELELE NDIDINGA I-VERSION 9.2 KODWA ANDIZI UKUBA NDINGAYENZA NJANI UKUZE NDENZILE UMCULO KANYE NETAMPOKO NDIBELE IPHONE YAM KUPHELA IPROGRAM YAMAVidiyo EMIFANEKISO ... MNTU MNCEDE NDINCEDE ..
Ndinengxaki efana neninzi yabantu kule forum, kwaye ndithi bendinayo, kuba sele ndiyisombulule ...
Izixhobo zeApple ngokungathandabuzekiyo zezona zihambele phambili esinokuthi sizibone kwimarike, kunye nesoftware yayo, yeyona iphambili, ngelishwa itekhnoloji evaliweyo. Ityala elisichaphazelayo ngoku, yindlela yokongeza umculo, iividiyo, iithoni, njl.njl. Yinkqubo egqwesileyo esebenzayo ubuncinci kakhulu kum. Ilula kwaye isebenza kakuhle, ndiyakucebisa.
Yeyiphi inkqubo endiyifunayo ukurekhoda ividiyo ???? Kutheni le nto ibhetri ihlala lincinci kangaka ??? Imali eninzi kwaye kukho iifowuni ezingcono kunye nexabiso eliphantsi
Emva kophando lwam, amawaka ezigidi zabantu kwihlabathi liphela afumana iimali mboleko zobuqu kubabolekisi abohlukeneyo. Emva koko, kukho amathuba amahle okufumana imali mboleko yexesha elifutshane kulo naliphi na ilizwe.
Kubonakala kum inkqubo elungileyo yokuba ikwazi ukuhambisa nayiphi na ingoma kwi-ipod, ingxaki abanayo abasebenzisi abaninzi kukuba abanakukwazi ukuhambisa iingoma.
Ziyongezwa zisebenzisa ithala leendaba. Kwelo candelo, ipod exhunyiwe iyavela kwaye kuya kufuneka udlulise iingoma kuphela. Isoftware ilula kakhulu kwaye ayizisebenzisi izixhobo ezinjenge iTunes.
Ndiyathemba ukuba ndiyisombulule ingxaki kuwe.
Pepe, ingxaki yakho kukuhlaziya iphone. Khuphela i-iTunes ehlaziyiweyo kwiwebhusayithi esemthethweni kwaye uhlaziye i-firmware yefowuni.
Xa uyifaka, uyisebenzise kwaye uqhagamshele i-iPhone, inkqubo ngokwayo iya kukuhlaziya okanye ubuncinci ikuxelele ukuba ufuna ukuyivuselela.
faka yonke into kodwa andikwazi ukudibanisa iphone
Ifowuni yokuHlola sitsho
Kumnandi ukuxhoma emva .. Ndiyithandile indlela izinto ezibonelelwe ngayo kweli nqaku .. Oku kunike ulwazi oluluncedo kakhulu ..
Phendula Uhlole Umnxeba
UAlberto garciacabo sitsho
Molo, kwimeko yam, i-iTunes iyandidibanisa kodwa ayizibeki iingoma kwi-iPod touch, oko kukuthi, indibeka ngqamaniso kodwa ayizikhuphi iingoma ngaphambili ukuba ndizikhuphele kwaye ayindishiyanga ixesha elide sesiphi isisombululo esinokubakho? Khuphela le nkqubo ???
Enkosi nemibuliso kwiiholide ezimyoli
Phendula u-Alberto garciacabo
ipod yam andikwazi ukubeka iifoto
Yris rodriguez hernandez sitsho
Ndifuna ukukhuphela inkqubo uPepe, ndingu-ami Hayfon 4
Phendula u-yris rodriguez hernandez
Alan Xavier sitsho
Kufuneka baye kuLaura Bozo bayobaxelela ngetyala hahaha ………… .. xD
Phendula u-alan javier
Byron bazurto sitsho
Hmm, bekunjalo ngaphambili, i-iOS inike iingxaki ezininzi kwaye ingathethi nge-iTunes kodwa yonke into itshintshile ukusukela nge-iOS 4 nakwi-iTunes 10 engaseniki ngxaki kwaye enkosi imisebenzi kaSteve ngale nto intle kangaka kwaye iluncedo kakhulu kwi-iPhone nangona zikhona uninzi lwezidenge kwaye zingazi nto zingazi nto malunga ne-iPhone kwaye zinezimvo zazo.
Phendula u-byron bazurto
Kukho abantu abazizidenge kakhulu abangafundanga nokwazi ukuba yeyiphi na into enako ukummmmm ngokoluvo lwam ukuba IZIMFAZA ngandlela zonke zegama.
Uyazi ukuba isebenza nge-iphone 4 iOS 5 kwaye ukuba ungandixelela ukuba ungayenza njani isebenze ingabulela kakhulu
Kuphela kufuneka ukhuphele yonke into ethi ngentla… ayikho enye into ... i-pk benza ... ukucima umculo… kufuneka bavule kuphela kwi-PC yam nha maz - ai guys mature sikiera a pokito….
Ngaba umbiza oqolileyo ukuba abhale ngoluhlobo?
sebas lopez sitsho
Isixhobo sam esine-IOS6 asindiboni
Phendula kwi-sebas lopez
UDaniel Paulino Perez sitsho
ufff enkosi kakhulu bhuti ndizokuvimba kwaye emva koko ndinyathele kwaye ndihlomle unjani
Phendula kuDaniel Paulino Perez
khuphela i-winamp kunye nesicelo kwakhona, faka ifowuni yam ye-3g, kodwa i-winamp ayiyiboni ifowuni yam NDICELA NDINCEDE !!!!!
Ndinengxaki kukuba le nkqubo ayiyiboni iphone 3g yam
Kulungile ndine iphone 3gs ingxaki endinayo
Okwangoku ndinayo itunes
Kwaye ndibeke njenge-2GB yomculo andifuni ukuyicima kuba bendinayo kwenye ikhompyuter kwaye ndiyilahlile, umba kukuba kwikhompyuter entsha xa ndidibanisa ifowuni kuyo, iingoma ebesele ndizicimile kubonakala kum
Kwaye xa ndiyinqamla kwaye ndivula ithebhu yomculo kwi-iphone, iingoma esele zicinyiwe ziyavela kwaye andinakukwazi ukuzicima, elo qhosha libomvu alibonisi xa usilayida umnwe kwaye ingoma ayinakuviwa kwaye ijongeka icace gca kune ezinye ezinokuviwa,
Umbuzo wam yile ngxaki ngaba itunes? Okanye ndingayisusa njani le nto?
UManuel Yesu Barba Moreno sitsho
U-Israel Barba Moreno
Phendula uManuel Jesus Barba Moreno
U-Emilio Simon sitsho
Le nkqubo ayikho kwiVenkile ye App
Phendula uEmilio Simón
UJavier Moreno sitsho
Ngaba iya kusebenza nge-ipods? O_o
Phendula kuJavier Moreno
UVinicio D UYesu Palma sitsho
Ndilandele eli phepha kwaye uya kufunda okuninzi uBrenda Veliz Polanco
Phendula uVinicio D UYesu Palma
UPaco Hernandez sitsho
Nge CopyTrans onakho, kwaye ngaphandle kokukhuphela i-iTunes, izisa ukhetho lokukhuphela umqhubi, kulungile, ndiyacebisa
Ndiyacacisa, kuya kufuneka uyifake kwi-pc, ungayikhupheli kwiVenkile ye App
Phendula kuPaco Hernandez
Molo Paco. Ndiyayazi kwaye ndiyayixabisa, kodwa le isimahla kwaye isebenza kwiWindows nakwiMac.
UCarlos Romero Iborra sitsho
Phendula uCarlos Romero Iborra
Cesar Cuamani umfanekiso obambe indawo
UJuan Carlos Vaca J sitsho
UGabriel Gabriel Villarroel Morón
Phendula kuJuan Carlos Vaca J
U-Lucas Goycoolea Molina sitsho
Ngaba ndingadlala umculo kwiikhompyuter ezahlukeneyo?
Phendula uLucas Goycoolea Molina
UGonzalo dzib sitsho
UAlvart Castro Jonga le nto ebekuxelele yona
Phendula Gonzalo Dzib
UAlvart castro sitsho
Kupholile ukuba andazi xd
Phendula u-Alvart Castro
Rake Veto sitsho
Akusekho simahla, akunjalo? Undicela ukuba ndithenge uhlaziyo lwe-ios 9… ..
Phendula uVeto Rascón
Into embi kukuba le nkqubo ikhutshelweyo yinguqulelo yesilingo kwaye emva kweentsuku ezisi-7 kuya kufuneka uyithenge okanye ube nekhowudi ... ngaphambi kokuba ndinayo ikopi edlulisiweyo kodwa ayisasebenzi kum, indixelela impazamo.
Itunes yinto yokwenene, ayinayo inzuzo ngaphezulu kwenkqubo yemveli. Ndingaphezulu kokuyiqhela kwaye isabonakala ngathi yinkunkuma kum. Ukubeka imeko, ndiyahamba, andinayo ikhompyuter kwaye ndithenge iCD, ndifuna ukuyidlulisela kwi-iPhone yam. Ngayo nayiphi na enye into ongayisebenzisa ungayenza nakweyiphi na ikhompyuter kodwa hayi kwi-iTunes ene-iPhone. Ayizenzi lula izinto kwaphela kwaye ibonakala ngathi inkunkuma kum
Sinikezela ngazo zonke iintlobo zemali mboleko kwi2% yenqanaba lenzala, phendula kwakhona ukuba unomdla. Enkosi ngeenkcukacha ezithe vetshe Nxibelelana nathi ngoku nge-imeyile: cnpholding30@gmail.com
Inkqubo yeGoPro ihlaziya kwaye yazisa nge "QuikStories"